सुखी को ? सम्पत्ति नै सुखको आधार हुनसक्छ भन्ने भ्रममा नपरौं
सम्पत्ति नै सुखको आधार हुनसक्छ भन्ने भ्रममा नपरौं । यसले दु:ख, पिडा र मानसिक टेन्सन आदि पनि थप्न सक्छ । यो युगमा सुखी को हुन सक्छ ? सुखी त्यसलाई भन्दछन् जसलाई सवै कुरा पुगेको होस् । मलाई लाग्दैन यस्तो कुनै मान्छे होला जस्तो । आज प्रशस्त धन पैसा हुनेलाई हामी सुखीको श्रेणीमा राखेका छौं । तर त्यो भन्दा दुखी मान्छे मैले अरू कोही देखेकै छैन ।
लोभको घडा जीवनमा कसैले भोर्न सक्दैन यो कटु सत्य हो । आज हरेक मान्छेलाई एक छाक खान र लाउन पुगे हुनेथियो तर यो सम्भव छैन । एउटा व्यक्तिको आडमा १० जना परिवार पाल्ने बोझ हरेक नेपालीले उठाउने गरेको देखिन्छ ।
यसको ठोस कारण हो – बेरोजगार । यदि बेरोजगार नभएको भए कोही खाली हुने थिएनन् । यसले ठूलो बोझमा बाचेकालाई राहत दिने थियो । मानिस किन यति स्वार्थमा डुब्दै गए हेर्दा सुन्दा दिक्क लागेर आउछ ।
थुप्रै धन सम्पत्ति भएर पनि यो धर्तीमा को सुखी रहेछ ? मर्ने बेलामा लगाएको लुगा समेत छोडेर जानुपर्ने रहेछ । यो सवै जान्दा जान्दै पनि मानिस किन यति स्वार्थमा डुब्दैछन् । भनिन्छ “सन्तोषम् सुखिनम असोन्तोसम दुखिनम” जहाँ सन्तोष छ त्यहाँ सुखी छ, जहाँ सन्तोष छैन त्यहाँ दु:ख छ ।
पूर्वजन्ममा हामीले राम्रो काम गरेर यो जन्ममा आयौं, त्यसैको फल आज हामीले भोग्दैछौ । दु:ख र सुख भन्ने कुरा लिएर आउनुपर्छ । पूर्वजन्ममा नराम्रो काम गरेर आएका रहेछौं भने लाख कोसिस गर्दा पनि हामीले सुखको भोग गर्न पाउने छैनौं ।
सुखी त्यो मान्छे हो जसको अघि पछि कोही छैन । उ लोभमा फसेको छैन भने उ सुखी छ । यदि उ लोभमा छ भने उ पनि दुखी छ भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ । यो जन्ममा राम्रो क्रम गर्न सके अर्को जन्ममा राम्रो घरमा जन्म हुन सक्छ तर जन्म स्वार्थको लागी नभई सामाजिक हितको लागी भएको थियो तर हामीले लोभ र लालचमा सवै भुलेयौ यो नै एउटा विडम्बना थियो ।
यो धर्तीमा स्वर्ग र नर्क यही छ । राम्रो काम गर्दै जान्छौं भने स्वर्ग छ भने नराम्रो काम गर्छौं भने नर्क यही छ । राम्रो कामको प्रशंशा राम्रो हुन्छ, उ मरेर गएपनि उ अमर हुन्छ । आज यो धर्तीमा जन्मने सौभाग्य पाएर पनि हामी केवल सामाजिक स्वार्थमा डुब्नुपर्नेमा आफ्नै स्वार्थमा डुब्दैछौं ।
मन्त्र र तन्त्रमा के शक्ति छ ? मन्त्र र तन्त्र विज्ञान हो, धर्म वा अन्धविश्वास होइन
तपाईलाई असफल बनाउने यी १० कारण केके हुन् ?